Dhegeyso:Wasarada waxbarashada Puntland oo Maanta Anbabixisay Kormeerayaasha Imtixaanka guud – Radio Daljir
Maajo 21, 2015 5:13 b 0
Arbaco, May 20, 2015 (Daljir) —Wasaarada Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee Dowlada Puntland ayaa maanta ambabixisay hawl-wadeenada Imtixaanaadka shahaadig ah Gobalada Puntland waxaana maanta ka baxay xarunta Imtixaanaadka ee Magaalada Garoowe Gawaarida iyo howlwadeenada Imtixaanka kuwaas oo guud ahaan u ambabaxay Gobalada Puntland.
Agaasimaha Imtixaanada ee wasaarada waxbarashada Axmed Saahid oo saxaafada kula hadlay Magaalada Garoowe ayaa ka warabixiyey sida ay u socoto howsha Imtixaanaadka waxaana uu sheegay in maanta ay baxeen dhamaan gawaaridii iyo howl-wadeenadiI Imtixaanaadka waxaana uu sheegay in Sanadkaan Imtixaanku uu gaaray deegaano uusan horayn.
Axmed Saahid ayaa guul u rajeeyey dhamaan ardayda ka qayb-qaadanaysa Imtixaanaadka waxaana uu ku booriyey arday u fariisanaysa Imtixaanka in ay ilaaliyaan Nidaamka iyo akhlaaqiyaadka Imtixaanka iskana ilaaliyaan wixii u keeni kara in Imtixaanka laga saaro ama dhibcoh looga jarto.
Qaar kamid ah Macalimiinta iyo Kormeerayaasha ka qayb-qaadanayah ilaalinta Imtixaanka oo la hadlay Idaacada Daljir ayaa iyaguna ka hadlay dareenkooda waxaana ay sheegeen in ay aad ugu faraxsan yihiin in lagu aaminay Mustaqbalka ardayda Puntland ayna howshooda si cadaalad ah u gudaan doonaan.
Imtixaanka shahaadiga ah ee Puntland ayaa waxaa uu bilaabanayaah maalinta sabtida ah ee ku beegan 23-05-2015-ka waxaana u fariisanaya 1050 arday dhamaan Gobalada Puntland iyadoona imtixaanku uu sanadkaan gaaray deegaano uusan horay u gaarin.
Dhegeyso codka Agaasimaha Imtixaanadka Wasarada waxbarashada.
M/weyne Gaas oo degmada Godob-jiraan u magacaabay Gudoomiye iyo ku xigeen